မွှားကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
မွှားကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Tick-borne encephalitis vaccine)သည် မွှားကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ (tick-borne encephalitis TBE)ကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤရောဂါသည် ဥရောပတိုက် အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း၊ အာရှတိုက်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် အဖြစ်များသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး (၈၇)ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ခုခံအားဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ မွှားအကိုက်ခံရပြီးမှ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကြွက်သားအတွင်းသို့ ထိုးနှံရသည်။ 
မွှားကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ အဖြစ်များသည့်နေရာတွင်နေသောလူအားလုံးကို ဤကာကွယ်ဆေးထိုးထားသင့်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောနေရာများတွင်တော့ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူများကိုသာ ဆေးထိုးသင့်သည်။ အကြိမ်ပေါင်း(၃)ကြိမ်ထိုးပြီးလျှင် နောက်(၃-၅)နှစ်ကြာတိုင်း ထပ်ဆင့်ထိုးသင့်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ရရှိသည့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကလေးအသက်တစ်နှစ် သို့မဟုတ် သုံးနှစ်တွင် အသုံးပြုရသည်။ 
မွှားကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လေ့မရှိပါ။ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နီရဲခြင်းနှင့် နာကျဉ်ခြင်းတို့သာ ဖြစ်တတ်သည်။ ယခင်က ထုတ်လုပ်သောဆေးများသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပို၍ဖြစ်တတ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု ထင်ရသည်။
ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၃၇)ခုနှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဆေးတစ်လုံးကို ဗြိတိသျှပေါင် (၅၀-၇၀)ခန့် ပေးရသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဤကာကွယ်ဆေး မရရှိနိုင်ပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Vaccines against tick-borne encephalitis: WHO position paper." (10 June 2011). Releve epidemiologique hebdomadaire / Section d'hygiene du Secretariat de la Societe des Nations = Weekly epidemiological record / Health Section of the Secretariat of the League of Nations 86 (24): 241–56. PMID 21661276.
↑ Demicheli V, Debalini MG, Rivetti A (2009). "Vaccines for preventing tick-borne encephalitis". Cochrane Database Syst Rev (1): CD000977. doi:10.1002/14651858.CD000977.pub2. PMID 19160184.
↑ Tick-borne encephalitis - Prevention (2015-10-15)။ 15 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "3: Infectious Diseases Related to Travel"။ CDC Health Information for International Travel 2016။ Oxford University Press။ June 1, 2015။ ISBN 978-0199379156။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မွှားကြောင့်ဖြစ်သော_ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=289741" မှ ရယူရန်
၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၆:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၆:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။